Dowlada Soomaaliya oo sheegtay inaysan ka warqabin shir loogaga hadlayo maamul u samaynta Kismaayo oo ka socda Nairobi
Updated About:233 days ago 0
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowlada waqtigeeda sii dhamaanaya C/samad Macalin Maxamuud ayaa sheegay in dowladiisa aysan ka warqabin shir loogaga hadlayo arrimaha maamulada gobolada koonfureed oo ka socda duleedka magaalada Nairobi.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisey Igad ayaa waxaa loogaga hadlayay sidii maamul loo dhan yahay loogu samayn lahaa gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magalada Kismaayo ee dhowaan ay la wareegeen maamulkeeda ciidamada AMISOM iyo kuwo dowlada Soomaaliya.
Kulankan oo dowlada Kenya ay tahay mid si weyn u horboodeysa ayaa laga yaabaa in uu dhaliyo khilaaf dhinaca dowlada Soomaaliya ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay sheegay in maamul rayid ah o oloo dhan yahay uu u samayn doono magaalada Kismaayo.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa hore u soo maray khilaafyo dhinaca maamulka ah, waxaana ciidamada haatan la wareegay magaalada Kismaayo kamid ah jabhadda Raaskaambooni oo gacanta ku haysa deegaano kale oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose.